५६ जिल्लामा कांग्रेसले चुन्यो नयाँ नेतृत्व, कुन जिल्लामा को ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
५६ जिल्लामा कांग्रेसले चुन्यो नयाँ नेतृत्व, कुन जिल्लामा को ?
२५ जिल्लामा देउवा समूह, २८ जिल्लामा पौडेल समूह र ३ जिल्लामा सिटौला समूहका नेताहरु जिल्ला सभापतिमा चुनिएका छन् ।
काठमाडौँ — कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ५६ जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ । ती जिल्लामा सभापतिसहित जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको टुंगो लागिसकेको छ । ५६ जिल्लाको परिणाम आएकोमध्ये २५ जिल्लामा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता सभापतिमा चुनिएका छन् ।
त्यस्तै, २८ जिल्लामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरूले जिल्ला सभापति जितेका छन् भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेताहरूले ३ जिल्लामा सभापति जितेका छन् ।
कुन जिल्लामा को बनेँ सभापति ?
काभ्रे – तीर्थ लामा
उदयपुर– हिमाल कार्की
भक्तपुर – दुर्लभ थापा
रुपन्देही – रामकृष्ण खाँण
इलाम– डम्बर खड्का
सुर्खेत – खड्गबहादुर पोखरेल
तनहुँ – जितप्रकाश आले
पर्वत– युवराज जोशी
डोटी – नरेन्द्रबहादुर सिंह
जाजरकोट – बेदराज सिंह
लमजुङ – टकराज गुरुङ
डडेलधुरा – भीमबहादुर साउद
पाँचथर – रुपनारायण जवेगु
सल्यान – केसबहादुर बिष्ट
मनाङ – शंकर गुरुङ
ताप्लेजुङ – गजेन्द्र तुम्याहाङ
रामेछाप – कान्छाराम तामाङ
म्याग्दी – खमबीर गर्बुजा
बझाङ – खडक बोहरा
पौडेल समूहनिकट सभापतिहरू
कपिलवस्तु – अब्दुल कलाम खाँ
काठमाडौं – सबुजकृष्ण बानियाँ
ललितपुर – जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
दार्चुला– ललितसिंह बोहरा
रुकुम पश्चिम – प्रेमप्रकाश वली
तेह्रथुम – अर्जुनबहादुर तुम्बाहाङ्फे
भोजपुर – विनोद बान्तावा
प्यूठान – विष्णुकुमार गिरी
अर्घाखााची – केशव श्रेष्ठ
रुकुमपूर्व – केशरमान रोका
मुस्ताङ – रोमी गौचन थकाली
संखुवासभा – दिपक खड्का
गोरखा – नन्दप्रसाद न्यौपाने
कालिकोट – अम्मबहादुर शाही
सिटौला समूहनिटक सभापतिहरू
झापा – देउमान थेबे
बागलुङ – जितबहादुर शेरचन
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १०:५९
चितवन — नेकपा (एमाले)को दसौं महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । मंगलबार बिहान ४ बजे केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय मतदान गरेपछि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया केही बेरअघि सम्पन्न भएको हो ।
निर्वाचनका लागि २१५३ जनाको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित भए पनि २११४ मत मात्र खसेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य बाबुराम दाहालले जनाएका छन् । बिहान २ बजेदेखि चुनाव हुने बताइए पनि ४ बजेलाई सरेको थियो । एमाले दसौँ महाधिवेशन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान सकिएलगत्तै मतदान गणना हुनेछ ।
पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा मतदान भएको हो । त्यस्तै, विभिन्न क्लस्टरका केन्द्रीय सदस्यमा पनि मतदान भइरहेको छ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
त्यस्तै, ६ जना उपाध्यक्षमा ७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो भने ७ सचिवका लागि ९ नेताले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । अधिकांश क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुँदा केहीमा मात्रै चुनाव हुने भएको छ ।
खुला सदस्य ८४ जनाका लागि १०५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै, प्रदेश १ खुला र महिला क्लस्टरमा निर्वाचन भएको हो । सुदूरपश्चिमको महिला क्लस्टरमा पनि निर्वाचन भएको छ । दलित खुला सदस्य, थारु खुला सदस्य, पिछडिएको क्षेत्र खुला सदस्यका लागि पनि निर्वाचन भएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ १०:४५